स्नातकमा आईटी पढ्न चाहनुहुन्छ ? यसरी छनौट गर्नुहोस् उपयुक्त कोर्ष र कलेज - Tech News Nepal Tech News Nepal
स्नातकमा आईटी पढ्न चाहनुहुन्छ ? यसरी छनौट गर्नुहोस् उपयुक्त कोर्ष र कलेज
यसकारण हामीले आईटी काेर्श गर्नुअघि उपयुक्त काेर्ष र कलेजकाे छनाैट कसरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी दिँदै छाैं ।
नेपालमा हाल स्नातक तहमा आईटी पढ्न ४/५ लाखदेखि १३/१४ लाखसम्म शुल्क लाग्ने कलेजहरु छन् । तपाईंले स्वदेशका विश्वविद्यालय र विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजका शुल्क अन्तर भेट्नुहुन्छ । परिवारको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएर त्यस अनूकुलको कलेज छनौट गर्नुहोस् ।